တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးက မကြာမီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဟု တာဝန်ရှိသူ ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသော မော်တော်ယာဉ်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ထိရောက်သော ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နှင့် မူဝါဒများစွာ ချမှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် မကြာမီ ပုံမှန် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်က ကပ်ရောဂါတစ်ကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့် မတည်ငြိမ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေများမှ မျှော်လင့်မထားသော သက်ရောက်မှုတို့ကြောင့် စီးပွားရေးသည် ယခုအခါ လေဆန်ကို ရုန်းကန်နေရကြောင်း အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (NDRC) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Meng Wei က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရုတ်တရက် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုသည် မကြုံစဖူးထိုးနှက်ချက်တစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဆိုသည်ကို သတိပြုသင့်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ခိုင်မာတောင့်တင်းသော ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းတစ်ချို့ ကျဆင်းမှုဘက်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအား မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ် ကာလ အလိုက် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (NDRC)သည် မက်ခရိုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် မူလရှိရင်းအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Meng Wei က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကော်မရှင်အနေဖြင့် ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် မူဝါဒများ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရေး နှင့် ခိုင်မာသည့်ရလဒ်များ ရယူနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သော တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုအား ထိန်းသိမ်းထားရန် နှစ်တိုးမူဝါဒကိရိယာများအား ဖန်တီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြင်းထန်သော ကပ်ရောဂါ နှင့် ရှုပ်ထွေးပြီးကြီးလေးသောပြင်ပအခြေအနေများ ရှိနေသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံသည် တည်ငြိမ်သောဈေးနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် စွမ်းရည် နှင့် ယုံကြည်မှု ရှိကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Meng Wei က ပြောကြားခဲ့သည်။
NDRC သည် ဈေးကစားခြင်းလုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းခြင်းအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဂျုံ ၊ စပါးကဲ့သို့ အစေ့အဆန် ၊ ကျောက်မီးသွေး နှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့မှုသေချာစေရန် တက်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပြည်ပကုမ္ပဏီများ၏ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြီးပြည့်စုံသောစက်မှုစနစ် ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့် အလွန်ကြီးမားသော ဈေးကွက် အရေးသာမှုများဖြင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ခိုင်မာအားကောင်းသောဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Meng Wei က ပြောကြားခဲ့သည်။
NDRC အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ၊ အနောက်ပိုင်း ၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်းသို့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ၊ ထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်းရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဖော်ဆောင်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်းများအား တိုးချဲ့ရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးသို့ ပြည်ပတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား ဖော်ပြထားသည့် တရားဝင်အချက်အလက်များအရ အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမှာ ပထမလေးလတာအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄ ဒသမ ၄၇ ဘီလီယံအထိ နှစ်အလိုက် ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကာလတူတွင် ၃၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာ မြင့်မားသည့်အခြေခံရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 17 (Xinhua) — China’s economy will return to normal operations soon thanks to effective epidemic control andaraft of policies, an official said Tuesday.
Official data showed that foreign direct investment into the Chinese mainland, in actual use, expanded 26.1 percent year on year to 74.47 billion U.S. dollars in the first four months, on the high base of 38.6-percent growth in the same period last year. ■